Eden Hazard oo ka hadlay dhibaatada ay leedahay xirashada maaliyad Cristiano Ronaldo – Gool FM
Eden Hazard oo ka hadlay dhibaatada ay leedahay xirashada maaliyad Cristiano Ronaldo
Dajiye June 16, 2020
(Madrid) 16 Juun 2020. Xiddiga kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo xulka qaranka Belgium ee Eden Hazard ayaa ka hadlay dhibaatooyinka iyo cadaadiska uu wajahayo isaga oo xiran maaliyada No. 7, kaasoo uu u xirnaan jiray Los Blancos Cristiano Ronaldo, ka hor inta uusan u dhaqaaqin Juventus.
Eden Hazard ayaan ciyaarin kulamo badan xilli ciyaareedkan, sababa la xiriira dhaawacyadii uu la kulmay xilliyadii la soo dhaafay, laakiin wuxuu si rasmi ah kaga qey galay kulankii Eibar ee Axadii la soo dhaafay, wuxuuna ku guuleystay inuu caawiyo goolka labaad ee uu dhaliyay Sergio Ramos.
Hadaba Hazard ayaa wareysi uu ku bixiyay Chanal-ka rasmiga ah ee kooxda wuxuu ku sheegay:
“Riyadaydu marwalba waxay ahayd inaan u ciyaaro Real Madrid, laakiin waxaan sidoo kale doonayay inaan ka ciyaaro Premier League, sidaas darteed waxaan aaday Chelsea”.
“Zinedine Zidane? Macno malahan haddii aad tahay taageere Real Madrid iyo hadii kale, hadaad tahay taageere dhabta ah ee kubadda cagta, waxaa suurtogal ah inaad jeclaato isaga, waxaan ku daawanay Real Madrid iyo France koobka adduunka iyo Euro”.
“Inkastoo uu tusaale ii yahay haddana waa tababaraheyga, inaan wax ka barto isaga aad ayey ii farxad galineysaa, waa qof daacad ah, wuu ila hadlaa marka uu doonayo inuu ila hadlo, wuxuu ahaa ciyaaryahan, marka wuu ogyahay baahida ciyaartoyda”.
“Marka aan ku jiro garoonka, kama fikiro lambarka 7-aad ee dhabarkeyga ah, kaliya waxaan ka fakarayaa inaan sameeyo waxa aan sameyn karo, xirashada lambarka kaddib Cristiano Ronaldo ma ahan wax sahlan, waxayna leedahay xoogaa dhibaatooyin ah, sababa la xiriira wax walba uu kooxda kula guuleystay, ka sokow Raúl González iyo dhamaan ciyaartoydii horey u xiratay maaliyada lambarkan, way adag tahay in la gaaro wax iyaga ka fiican”.
Intaas kaddib Eden Hazard ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray:
“Champions League aad ayuu muhiim u yahay, waxaan u ciyaarayaa maaliyadan darteed marka aan soo galo garoonka oo aan arko garoonka Santiago Bernabéu, waana ku faraxsanahay, taasi waa sababta aan halkaan u joogo, ku ciyaarista garoonkan iyo inaan caawiyo asxaabteyda kooxda, waa riyo ii rumowday”.
10-kii Tababare ee abid ugu fiicnaa horyaalka Premier League oo lagu dhawaaqay, xilli safka hore ay ka soo muuqdeen Ferguson, Wenger & Mourinho
“Aad baan u naxay markaan arkay Ronaldo” – Andy Cole